24V 100W Voltage Linear LED Driver China Manufacturer
Nkọwa:24V Onye ọkwọ ụgbọala nwere ike ime,Onye ọkwọ ụgbọala na-acha ọkụ,Mgbaaka nke 24V Linear ọkụ
Home > Ngwaahịa > Ọkwọ ụgbọala na-enwu ọkụ n&#39;ahịa > LED Linear Lights Driver > 24V 100W Voltage Linear LED Driver
24V 100W Voltage Linear LED Driver
Ihe Nlereanya.: HR100W-02-24
HR100W-02-24, nke a kwadoro maka Mkpụrụ obi dị elu nke na-eduzi elu, na-eduzi ngwa ngwa akara, iji rụọ ọrụ Linear Lighting Solution. Volta Constante 24V Flickr free 0-10V / PWM / RX dimkpa Dual Driver Slim 100W 4200mA , na njedebe nke 100W, UL, FCC, CE na-erube isi, mmepụta voltage dum nke na-enweghị mmepụta mmiri. Nkeji ahụ kwesịrị ekwesị maka ihe ndị a na-eduzi & ọkụ ọkụ. Ụdị njirimara ndị ọzọ nke oke gụnyere 100-277V , nchebe megide obere circuit, n'elu ibu na thermal ruo 110 Celsius C, gafee akụkụ dum nke unit ahụ.
- 24V amaghi onye nduzi
Akara ogologo oge
Voltage mmepụta: 12V
H100W-02-24, 24V Dimmable Dugara Driver mgbe nile voltaji dimmable ọkwọ ụgbọala, ịpụ free 0 / 1-10V / PWM / RX dimming, linear ọkụ ngwọta, Desigen n'ihi na elu lumen Linear ọkụ na elu àgwà mere ibe. Ọkwọ ụgbọala na-ahụ maka ume. Ejiri ígwè rụọ ọrụ ya, ihe eji eme onwe ya maka usoro njikọ njikọta, nke kwesịrị ekwesị maka ahịa Europe na North America.
Ngwunye Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Dị Mfe 20W Kpọtụrụ ugbu a
High arụmọrụ Ultra ebughi oke Linear ikanam Driver Profaịlụ Kpọtụrụ ugbu a
24V Onye ọkwọ ụgbọala nwere ike ime Onye ọkwọ ụgbọala na-acha ọkụ Mgbaaka nke 24V Linear ọkụ 10V Onye ọkwọ ụgbọala nwere ike ime 24V Onye ọkwọ ụgbọala Ọkwọ ụgbọala nwere ike idozi Onye ọkwọ ụgbọala a mere Onye ọkwọ ụgbọala njikọ